ktmkhabar.com - शैक्षिक प्रमाणपत्र ऋण लिन के चाहिन्छ ?
शैक्षिक प्रमाणपत्र ऋण लिन के चाहिन्छ ?
शैक्षित प्रमाणपत्र धितो कर्जा लिनका लागि पहिला सो लिने व्यक्तिसँग स्थायी लेखा नम्बर हुनु जरुरी छ । कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नपरेको र कम्तिमा स्नातक उत्तीर्ण भएको तथा ४० वर्ष उमेर ननाघेको व्यक्ति हुनुपर्छ ।
सरकारी निकायबाट कम्तीमा ७ दिनको उद्यम वा व्यवसाय गर्ने सीप विकास तालिम अनिवार्य रूपमा लिएको हुनुपर्छ । २५ लाखको सीमालाई मौद्रिक नीतिमै समेटिने राष्ट्र बैङ्क स्रोतले समेत बताएको छ ।
शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण पाउने व्यवस्था ४ वर्ष अघिदेखि शुरुवात भएको कुरा सबैलाइ थाहा छ । त्यो समयमा ७ लाखको अधिकतम सीमा तोकिएको थियो भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले २५ लाख रुपैयाँसम्मको सीमा निर्धारण गरेको छ ।
यसलाई बिलकुलै सरकारको नयाँ कार्यक्रमको रुपमा बुझ्नेहरू धेरै भेटीएका छन तर यो कार्यक्रम नया भने होईन अधिकतम सिमा तोकिएर २५ लाख पुर्यार सरकार लोकपृय बन्न खोजेको मात्र हो ।
आर्थिक वर्ष २०७८र०७९ को बजेटमा जब अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २५ लाख शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने कुरा बताए युवाहरु विलकुलै नयाँ कार्यक्रम आए जसरी सामाजिक सञ्जालमा मानौ प्रमाण पत्र पेस गर्ने बित्तिकै ऋण पाईहालिने जसरी प्रस्तुत भए तर यस्तो सहज पटक्कै छैन ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानका ७ प्रकारका योजनाहरु मध्येको एक योजना हो, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिन पाउने । सरकारले यो योजनाको सकारात्मक र नकारात्मक दुवै खालका टिप्पणी सुन्न सकिन्छ । तर अहिले सम्म सरकारको योजना सफल कार्यान्वयन भएको पटक्कै छैन ।
शैक्षिक प्रमाण पत्र धितो कर्जा लीन सबैभनदा पहिले प्रोजेक्ट डिजाईन बैंकमा पेस गर्नु पर्यो बैंकले मागेजती कागजान जुटाएर बैंक स्वयमले आफु नडुब्ने देखे मात्र पक्रिया अगाडि बड्ने छ ।
शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिनेलाई सरकारले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिँदै आएको छ । अब पनि सोही ब्याजदरमा यस्तो खालको ऋण पाउने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बताएका छन् । तर कार्यन्वयनको पाटो हेर्न बाकी छ ।
शैक्षित प्रमाणपत्र धितो कर्जा